Munaafaqnimada gargaarka cad, iyo doqonnimada madaxdeenna Madow / Afrikaanka ah: adduun ay ku badan tahay hanti-wadaagga, gargaarka caddaanka ah ee la siiyo waddamada Afrika waa sida gargaarka koowaad ee kansarka. (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 14, 2020 05: 14 No Comments
Hanti-wadaagga ayaa ikhtiraacay "Aragtida horumarka ee adduunka lagu soo bandhigo jaranjaro". Jaantuska waxaa ugu sarreeya waddamada loogu yeero “Horumaray”. Kuwani waa Wadamada warshadaha leh marka loo eego qaabka hanti goosadka ah ee caasimada ay ku urursan tahay gacanta xoogaa warshadeeyayaal ah oo urursada hantida iyagoo xadaya "qiimo dheeri ah" oo ay soo saareen fasalka shaqeeya, taasi waa in la yiraahdo shaqaalaha adduunka oo dhan.
Qeybta ugu hooseysa ee miisaanka waa waddamada loogu yeero dalalka aan horumarin, la badankooduna waa Afrika. Wadamadani waxay soo saaraan oo keliya alaabta ceyriinka ah ee waddamada raasamaalka. Wax soosaarka waxsoosaarka ayaa dib ugulaabanaya Afrika si xad dhaaf ah oo ka qaalisan qiimaha bilowga ee alaabta ceeriin. Tan macnaheedu waxa weeye, Afrika si fudud ayaa loo dhacay.
Sheegashada si loo hubiyo xaalado nololeed oo wanaagsan oo dadkooda ah, tani waa sida hoggaamiyeyaasha Afrika ay u adeegsadaan caawimaadda waddamada warshadaha horumaray si ay gacan uga geystaan ​​dhisidda kaabayaal sahlaya soo saarista iyo gaarsiinta alaabada ceyriin ee la dhacay waddamada. warshadeysan. Wali waxay ku jirtaa xagga dambe ee fasalka shaqaalaha gargaarkaan ( amaah) waxaa lagu bixin doonaa dulsaar aad u weyn.
Hanti-wadaagayaashani waxay abuuraan, macnaheedu waa, boorgeois isuduwaha taas oo waxtar u leh maareeyayaasha iyo kuwa fududeeya hawsha nidaamka hanti-wadaaga. Fasalkan, waxa loogu yeero "waddammada aan horumarin", waxay ku nool yihiin ku dhowaad isla heerkii ay ka haysteen sayidkoodii hanti-wadaaga reer galbeedka. Maxaa yeelay iyagu waxbay barteen, waayo la qayb badan oo ka mid ah dalalkan reer galbeedka ah ama ugu yaraan waxay adduunka u qaabeeyaan sida ay u kala aaminsan yihiin iyo aragtidooda. Dalal badan oo Afrikaan ah, xorriyadoodii ka dib, waxay isku arkeen dhaqaale ahaan dhulka maxaa yeelay nidaamka hanti-goosadku waxay ahayd inuu xoog kula soo noqdo sidii xilligii gumaysiga.
Si lama filaan ah, wax iskama beddelin Afrika xorriyadda ka dib. Dadkooda intiisa kale, waa cadaab! Munaafaqnimadu sidaa darteed waa mid baahsan, taakuleynta caddaanka iyo doqonnimada hoggaamiyeyaasha madow ee Afrika.
Sep27 01: 07